मारिया ओरुना र लस लिब्रोस डेल पोर्टो एस्कोन्डिडो | समाचार साहित्य
मारिया Oruña द्वारा पुस्तकहरु
जुआन अर्टिज | 05/01/2022 02:03 | लेखकहरू, किताबहरु, कालो उपन्यास
Suances को परिदृश्य
मारिया ओरुना एक स्पेनिश लेखिका हुन् जसले साहित्यिक संसारमा उनको प्रशंसित गाथालाई धन्यवाद दिएकी छिन्: Puerto Escondido किताबहरु। शृङ्खला सुरु गर्ने समानतापूर्ण कार्य सन् २०१५ मा -लुकेको बन्दरगाह - यसलाई धेरै भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ र त्यसपछिका किस्ताहरूको सफलताको लागि नेतृत्व गरिएको छ। उनको कथा भित्र भ्यालेन्टिना रेडोन्डोको अन्तरदृष्टि चरित्र बाहिर खडा छ, जसको नाम साहित्यिक डोलोरेस रेडोन्डोको सम्मानमा राखिएको थियो।
Oruña सूक्ष्मता को लागी बाहिर खडा छ जसमा उनले आफ्नो कामहरु को सेटिङहरु को वर्णन गर्दछ, जहाँ स्पेनिश परिदृश्य को एक विशेष भूमिका छ। उनको काममा यस्तो प्रभाव परेको हो त्यो क्षेत्रमा, सन् २०१६ मा सुआन्सेस सिटी काउन्सिलले उद्घाटन गरेको थियो Puerto Escondido साहित्यिक मार्ग. यसमा, तपाइँ क्यान्टाब्रियाका विभिन्न ठाउँहरू मार्फत यात्रा गर्नुहुन्छ जुन श्रृंखलामा महत्त्वपूर्ण थियो।
1 मारिया Oruña द्वारा पुस्तकहरु
1.1 Puerto Escondido पुस्तक श्रृंखला
1.1.1 लुकेको पोर्ट (२०१५)
1.1.2 जाने ठाउँ (२०१७)
1.1.3 जहाँ हामी अजेय थियौं (2018)
1.1.4 के द टाइड लुकाउँछ (२०२१)
1.2 लेखक द्वारा अन्य पुस्तकहरू
1.2.1 चार हावाको जंगल (2020)
2 लेखक को बारे मा, मारिया Oruña
श्रृंखला Puerto Escondido पुस्तकहरू
लुकेको पोर्ट (2015)
सेप्टेम्बर 2015 मा प्रकाशित, यो एक अपराध उपन्यास हो जसको साथ लेखकले उनको प्रसिद्ध गाथा सुरु गरे। कथा क्यान्टाब्रियामा सेट गरिएको छ र कथानक दुई चरणहरूमा प्रकट हुन्छ: वर्तमान समय र स्पेनी गृहयुद्ध को वर्ष। कथामा, ओलिभर गोर्डन, भ्यालेन्टिना रेडोन्डो र सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट साबाडेल वर्तमानका मुख्य पात्र हुन्; जबकि विगतमा फर्नान्डेज परिवारका अनुभवहरू वर्णन गरिएको छ
ओलिभरले औपनिवेशिक घर विरासतमा पाए -भिल्ला मारिना- समुद्र द्वारा स्थित क्यान्ट्याब्रियामा। आफ्नी आमाको मृत्यु पछि, जवान अंग्रेजले सम्पत्तिलाई होटलमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरे। अप्रत्याशित रूपमा, पुन: निर्माण पज हुनुपर्छ, जस्तै तिनीहरूले लुकेको बच्चाको लाश भेट्टाए मेसोअमेरिकन व्यक्तित्वको छेउमा घरको भित्तामा.
भयानक खोज पछि, अन्य हत्याहरू सहरको वरपरमा हुन्छन्, अपराधहरू जुन आश्चर्यजनक रूपमा जोडिएको देखिन्छ। तुरुन्तै, लेफ्टिनेन्ट भ्यालेन्टिना रेडोन्डो र सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट साबाडेलको नेतृत्वमा सिभिल गार्ड अनुसन्धान कोर, हत्याराको खोजीमा निस्कियो। यसैबीच, ओलिभरले पारिवारिक गोप्य कुराहरू पत्ता लगाउँछन् जसले उसलाई देशमा कठिन समयमा लैजान्छ: स्पेनी गृहयुद्ध।
लुकेको बन्दरगाह (अपराध...
जाने ठाउँ (2017)
यो शृङ्खलाको दोस्रो किस्ता हो। यो फेब्रुअरी 2017 मा प्रकाशित एक अपराध उपन्यास हो र, पहिलो पुस्तक जस्तै, Suances मा सेट गरिएको छ। कथा अघिल्लो कथानकको महिनौं पछि लिन्छ र एक रहस्यमय हत्याको बीचमा प्रकट हुन्छ। फेरि, यसले भ्यालेन्टिना रेडोन्डो, ओलिभर गोर्डन र पुलिस समूहलाई तारा गर्नेछ।
क्यान्टाब्रिया शहरमा शान्त समय पछि, पुरानो भवनको भग्नावशेषमा एक महिलाको शव फेला परेको छ। लाशलाई सावधानीपूर्वक ठाउँमा राखिएको थियो, उसले मध्ययुगीन रोयल्टीको पोशाक लगाएको थियो, र यसको अतिरिक्त, उसको हातमा दुर्लभ वस्तु थियो। पोस्टमार्टमको नतिजाले प्रहरी बल र क्षेत्रका बासिन्दा दुवैलाई चकित बनाएको छ।
यो घटनापछि इलाकामा हत्याको लहर फैलिएको छ । जसले फेरि अलार्म अन गर्छ। डरलाग्दो दृश्य देखेर, लेफ्टिनेन्ट रेडोन्डो र सिभिल गार्डका उनका सहकर्मीहरू हत्याराको खोजी सुरु गर्ने निर्णय गर्छन्।। आफ्नो भागको लागि, ओलिभरले आफ्नो हराएको भाइको खोजीमा साथीलाई मद्दत गर्दछ, एक अवस्था जसले अन्ततः आश्चर्यजनक परिणामहरू ल्याउँछ।
जहाँ हामी अजेय थियौं (2018)
आफ्ना पूर्ववर्तीहरू जस्तै, जहाँ हामी अजेय थियौं यो एक थ्रिलर हो जुन Suances को तट मा स्थान लिन्छ। यो 2018 मा प्रकाशित भएको थियो र फेरि भ्यालेन्टिना र ओलिभर अभिनीत छ। यस पटक, कथानक अघिल्लो पुस्तकहरूसँग लिङ्क गरिएको छैन र असाधारण विषयवस्तु थपिएको छ।.
भ्यालेन्टिना ओलिभरसँग छुट्टी मनाउन गर्मीको अन्त्यतिर हेर्दै छिन्। तर नयाँ केसको लागि कल प्राप्त गर्दा सबै कुरा उल्टो हुन्छ: मास्टरको दरबारको माली मृत देखा पर्यो। यो सम्पत्ति केही समयको लागि अव्यवस्थित थियो, तथापि, लेखक कार्लोस ग्रीन, जसले परिसर विरासतमा पाएका थिए, भर्खरै सरेका थिए।
सुरुमा, मानिसको मृत्यु प्राकृतिक कारणले भएको अनुमान गरिएको छ, तर शवलाई कसैले छोएको अनुसन्धानले देखाएको छ। यो सिद्धान्त बलियो हुन्छ जब भ्यालेन्टिना ग्रीनको अन्तर्वार्ता लिन्छ र उसले स्वीकार गर्छ कि उसलाई रहस्यमय संस्थाहरूले रातमा विचलित गरेको थियो।
यद्यपि लेफ्टिनेन्ट असाधारणको बारेमा शंकास्पद छ, उनी, ओलिभर र उनको टोली अकल्पनीय घटनाहरूमा फसेका छन्।। यसले उनीहरूलाई अन्य प्रतिमानहरू अन्तर्गत अनुसन्धानको सामना गर्न उत्प्रेरित गर्छ, जसले महल र घटनाहरूमा डुबेका मानिसहरूको बारेमा अविश्वसनीय खोजहरू ल्याउँछ।
जहाँ हामी अजेय थियौं:...
ज्वारले के लुकाउँछ (2021)
यो लेखकको सबैभन्दा भर्खरको उपन्यास र श्रृंखलाको अन्तिम किस्ता हो को पुस्तकहरु लुकेको पोर्ट। यो एक स्वतन्त्र थ्रिलर हो जसमा लेफ्टिनेन्ट भ्यालेन्टिना रेडोन्डो र पुलिस अनुसन्धान बलका उनका सहकर्मीहरू मुख्य पात्र बन्छन्। नोभेम्बर 2021 मा, स्पेनमा, कामले "एल कोर्टे इङ्लेस" को पुस्तक विक्रेताहरूद्वारा वर्षको उत्कृष्ट कथा पुस्तकको भेद प्राप्त गर्‍यो।
भ्यालेन्टिनासँग कठिन समय छ। समानान्तर मा, एक भयानक घटना शहर मा भयो: Jउदिथ पोम्बो - सान्टान्डर टेनिस महासंघका अध्यक्ष - मृत देखा पर्यो। पाहुनाहरूको एक समूहसँग भेट गरेपछि उनको शव पाल डुङ्गाको केबिनमा फेला परेको थियो।
अनुसन्धान लेफ्टिनेन्ट रेडोन्डो र उनको टोलीका लागि चुनौती हुनेछ, जसले फेरि अविश्वसनीय अपराधको सामना गर्यो। महत्त्वपूर्ण महिला भित्रबाट बन्द कोठामा र दुर्लभ घातक चोटको साथ भेटिएकी थिइन्, जसले तथ्यलाई रहस्यले भर्दछ। दृश्य अगाथा क्रिस्टी वा एडगर एलन पोको अपराध उपन्यासहरू मध्ये कुनै एक जस्तो देखिन्छ।
ज्वारले के लुकाउँछ:...
लेखक द्वारा अन्य पुस्तकहरू
चार हावाको जंगल (2020)
को चौथो पुस्तक होhttps://www.actualidadliteratura.com/entrevista-con-maria-oruna-la-autora-de-el-bosque-de-los-cuatro-vientos/ Oruña, अगस्त 2020 मा प्रकाशित भएको थियो र अहिलेसम्म यो एक व्यक्तिगत काम हो। यो ग्यालिसियाको सान्तो एस्टेभोमा सेट गरिएको रहस्य उपन्यास हो। कथानक दुई टाइमलाइनमा प्रकट हुन्छ: विगत - XNUMX औं शताब्दी - र वर्तमान, क्यारेक्टरहरूको सम्बन्धले पालैपालो जोडिएको।
र 1830, डा. भ्यालेजो आफ्नी छोरी मारिनासँग सान्टो एस्टेभोको मठमा जानुहुन्छ, Ribeira Sacra मा Ribas del Sil मा स्थित छ। एक पटक ठाउँमा, मानिसले आफूलाई डाक्टरको रूपमा स्थापित गर्छ मण्डली र शहर को। उनको पक्षको लागि, युवतीलाई चिकित्सा पढ्ने इच्छा र समाजले समयको चलनलाई अस्वीकार गर्ने बीचमा फाँसी दिइनेछ। यसरी तिनीहरूले सान्दर्भिक घटनाहरू अनुभव गर्नेछन् जसले भविष्यलाई चिन्ह लगाउँदछ।
लगभग दुई सय वर्षपछि, मानवशास्त्री जोन बेकर पुरानो मठमा आइपुगे, कलाको हराएको काम खोज्ने उनको शिल्पबाट प्रेरित। त्यो ठाउँमा उसले पुरानो मिथकको बारेमा जान्छ, जिज्ञासाले भरिन्छ र अनुसन्धान गर्ने निर्णय गर्छ। तर केहि अप्रत्याशित हुन्छ: बेनेडिक्टाइन कपडामा एक जवान मानिस मृत फेला पर्यो पवित्र स्थानको बगैंचामा।
बेकर तथ्यको अनुसन्धानमा संलग्न छन्, र सबै कुराले संकेत गर्दछ कि के भयो रहस्यले भरिएको अतीतसँग जोडिएको छ। त्यहाँबाट, एक लगातार दुई युगहरू बीचमा सर्छ, "नौ घण्टीहरूको कथा" उपस्थित छ र एक विशाल भूमिका प्राप्त गर्दछ।
चार जनाको जंगल...
लेखक को बारे मा, मारिया Oruña
मारिया ओरुना एक ग्यालिसियन वकिल र लेखक हुन् जसको जन्म 1976 मा भिगोमा भएको थियो। दश वर्षसम्म उनले श्रम र व्यावसायिक क्षेत्रमा कानूनको अभ्यास गरिन्। त्यो अनुभवको नतिजाको रूपमा, उनले आफ्नो पहिलो पुस्तक प्रकाशित गरे: तीरंदाजको हात (२०१३)। यो कथा व्यावसायिक उत्पीडन र मनमानी को बारे मा छ। 2015 मा उनले थ्रिलर प्रस्तुत गरे लुकेको बन्दरगाह, जसबाट प्रसिद्ध गाथा सुरु भयो Puerto Escondido किताबहरु।
अहिले सम्म, श्रृंखलामा तीन अतिरिक्त उपन्यासहरू छन्: जाने ठाउँ (2017), जहाँ हामी अजेय थियौं (2018) र ज्वारले के लुकाउँछ (2021)। त्यस्तै गरी, उनको संग्रह व्यक्तिगत काम द्वारा पूरक छ: चार हावाको जंगल (2020)।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » मारिया Oruña द्वारा पुस्तकहरु
Magi बारेमा पुस्तकहरू। कथा र कथाहरूको चयन